ACCORHOTELS : Hitondra tombontsoa ho an’ireo tanora Malagasy tsy an’asa
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy afak’omaly, tetsy Ankorondrano, ny fananganana ilay trano fandraisam-bahiny lehibe “Accorhotels”, izay hampitombo isa ireo efa mijoro eto Antananarivo. 1er février 2017
Fantatra ho isan’ ireo trano fandraisam-bahiny goavana indrindra ary manaraka ny fenitra iraisaim-pirenena izy io.
Ny orinasa malagasy “Eden” miaraka amin’ny vondrona “Accor” no tompon-kevitra sy mpiara-miasa manokana amin’ny fanatanterahana ny asa, izay haharitra ao anatin’ny 20 ka hatramin’ny 30 volana,ny fananganana azy araka ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra. Etsy Ivandry no hananganana ny fotodrafitrasa ka afaka telo volana eo ho eo dia hanomboka ny asa.
Ankoatra ny tombontsoa hoentin’ny trano fandraisam-bahiny eo amin’ny fandraisana sy ny fampiantranona mpizaha tany dia hitondra rivo-baovao ho an’ny tontolon’ny fampananana asa eto amintsika ny fananganana ity trano fandraisam-bahiny lehibe ity. Voakasika ao anatin’izany manokana ireo tanora, ka asa hatrany amin’ny 250 isa no ho ntin’ny “Accorhotels”, tafiditra ao anatin’izany ny fanadiovana trano, ny fandrahoana sakafo, ny fandraisana ny mpanjifa sy ny maro hafa tsy voatanisa.
Araka ny fanazavana noentin’ny Talen’ny hotels Ibis Ankorondrano, Zak Mouafik dia hisy ny fampiofanana ireo mpiasa mialoha ’ny handraisan’izy ireo izay asa sahaniny.
Maherin’ny 150 ny efitrano ho hita ao anatin’ity hotely goavana vao hantsangana ity, ankoatra izay ho hita ao ihany koa ny efitrano lehibe fanaovana fivoriana, trano fisotroana sy fisakafoanana ary trano fikarakarana vatana sy fanaovana fanatanjahantena. Vinavinaina hatrany amin’ny 20 000 000 Euros ny ho teti-bidin’ny fangananana ity hotely lehibe ity.